Ampidino ao anaty iTunes ny angona tsiambaratelo an'ny fitaovana iOS anao Avy amin'ny mac aho
Androany aho te hizara aminao lafin-javatra iray izay angamba tsy noheverinao mihitsy na nanontanianao ny tenanao foana, fantatrao ve ny fomba hanaovana azy. Ny tena izy dia rehefa misy mpampiasa Apple manana iPhone sy Apple Watch na manana tambajotran-efitrano iray voalamina ao amin'ny HomeKit, dia midika izany fa ny fampiasana ilay rindranasa Casa sy ny fampiharana WatchRehefa mividy iPhone vaovao ianao dia tsapanao fa na ny fametahana ilay iPhone teo aloha aza ao amin'ny iTunes na iCloud dia averinao avy eo, ny data momba ny Fahasalamana sy ny angona voatahiry ao amin'ny app Home dia tsy tazonina.
Ity dia olana iray raha nandany fotoana nandalo ireo olana tamin'ny Apple Watch ianao na nametraka ny kojakoja mifanaraka amin'ny HomeKit anao ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao fa hitandrina an'ity data ity sy hitahiry izany hatrany, mila manaraka dingana vitsivitsy vitsivitsy ianao.
Rehefa mampifandray ny iPhone na iPad antsika isika iTunes amin'ny MacHo hitanao fa misy kisary kely miseho eo amin'ny bara ambony, rehefa manindry azy ianao dia efa asehony antsika ny varavarankely izay ahitantsika ny mombamomba ilay fitaovana mihitsy. Eny, raha eo amin'ny tsanganana ankavia dia tsindrio ny Famintinana, Ny andiana entana sy fampahalalana dia aseho eo amin'ny faritra ankavanan'ny varavarankely.
Raha midina amin'ity efijery ity izahay dia ho hitanao fa eo amin'ny farany ambany ianao dia manana faritra antsoina Backups ahafahantsika misafidy ny hanao kopian'ny zavatra rehetra ao amin'ny iCloud, miaraka amin'ny vidin'ny habaka aterak'izany, na hoe afaka manao kopia eo an-toerana amin'ny solosaina ianao. Eny, eto no misy ny dingana lehibe raha tianao ho voatahiry ao anaty kopia ireo angona voalaza etsy aloha.
Etsy ambany no ahitanao izany amin'ny filazanao amin'i iTunes mba hanao kopia amin'ny solosaina, rehefa tsy manondro azy isika ary ndao atao encrypt ny kopia misy lakile dia ny backup fa hanana ny angon-drakitra Fahasalamana sy HomeKit ao anatiny.
Noho izany, ho famintinana, mba hahafahan'ny angon-drakitra tianao tazonina rehefa averinao amin'ny laoniny ny backup anao amin'ny iPhone, Tsy maintsy manao kopia backup amin'ny solosaina aloha ianao amin'ny alàlan'ny fanoratana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iTunes » Ampodio amin'ny iTunes ny angon-drakitry ny fitaovana iOS